काठमाडौं । सिजन मिडियाले राजधानीमा गरेको ‘मिस टिनकलेज २०१७ मा रिलायन्स कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत १९ वर्षीया स्वाती श्रेष्ठले शीर्ष ताज जितेकी छन् । उनले विधागततर्फको ‘मिस मल्टिमिडियाको अवार्ड पनि आफ्नो पोल्टामा पारिन् । उनले उपहार स्वरुप टिभिएस जुपीटर स्कुटर पनि जितिन् । प्रतियोगितामा लुना प्रधान फष्ट रनरअप र
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका– १५ दीपशिखारोडका १२ वर्षीय आदर्श योगीले उत्सर्ग डान्सिङ स्टार ४ को उपाधि हात पारेका छन् । राप्ती क्षेत्रको सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित नृत्य प्रतियोगिताको रुपमा स्थापित उत्सर्ग डान्सिङ स्टारको सिजन ४ को मंगलबार घोराहीमा भएको फाइनलमा उनले उपाधिसहित ५० हजार नगद हात पारेका हुन् । उनी
काठमाडौं । सिजन मिडियाद्वारा आयोजित “टिभिएस जुपीटर मिस टिन कलेज सिजन ५” मा सहभागी प्रतियोगीहरुले मकवानपुरको टिस्टुङ पालुङमा अवस्थित ओम अध्याय रिसोर्टमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा प्रायजसो प्रतियोगीहरुले विभिन्न नेपाली गीतहरुमा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस अवसरमा केही प्रतियोगीहरुले नेपाली तथा अंग्रेजी गीतहरु गाएका थिए
नेपालगञ्ज । डान्स आइकन दाङ (डिआइडी) सिजन– २ को बाँकेको नेपालगञ्जमा भएको अडिसनमा २३ जना प्रतिष्पर्धी छनौट भएका छन् । डि टेन इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि.ले आयोजना गरेको नृत्य विधाको प्रतिष्पर्धात्मक महाभिडन्तको सिजन– २ को नेपालगञ्ज अडिसन शनिबार सम्पन्न भएको डिआइडीका संयोजक बिष्णुकुमार देवकोटाले जानकारी दिए । नेपालगञ्जमा छनौट हुनेहरुमा सुमित राजबंशी,
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा चर्चामा आएको तीज कोसेली “नमुना जोडी”को वास्तविक कुरा निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको छ । शितल शर्माको पनि जहाजले दर्शकको राम्रो साथ पाएसँगै आफू साङ्गीतिक क्षेत्रमा अझै चासो दिएर लागेको बताउने शितल शर्माको तीज कोसेली “नमुना जोडी” केही दिन पहिले मात्रै सार्वजनिक भएको हो । विन्ध्यबासिनी म्युजिकले
पशुपति शर्मा र जुनाको “माइती भन्छन् किन आइती ?” [भिडियोसहित]
काठमाडौं । अहिलेको चर्चित तथा व्यस्त लोक तथा दोहोरी गायक र गायिकाद्वय पशुपति शर्मा र जुना श्रीस मगरले “माइती भन्छन् किन आइती ?” बोलको तीजको कोसेली बजारमा ल्याएका छन् । पशुपति शर्माको लय र शब्द रहेको यस गीतमा पशुपति र जुना दुबैको सुमधुर स्वर रहेको छ । मगर्स क्रियशन कम्पनीको
यसपालिको तीजमा चन्द्र शर्माको बाच्छीले धान खायो
काठमाडौं । दाङबाट लोकदोहोरी गीतको क्षेत्रमा केही गरौं भन्ने हुटहुटीले राजधानी छिरेका केही युवाको नाम लिनुपर्दा चन्द्र शर्माको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उनै चर्चित लोकदोहोरी गायक चन्द्र शर्माको बाच्छीले धान खाएको छ यसपालिको तीजमा । उनको धान बाच्छीले खाएको होइन । बरु उनले
कोमल वलीलाई अब चाहिएन पोई
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष तीज आउन थालेपछि कोमल वलीको पनि तीज गीत आइहाल्थ्यो । उनको गीतमा प्रायः शिवजीसँग पोई चाहियो भनेर प्रार्थना गरिएको हुन्थ्यो । यसै वर्ष पूर्णतः राजनीतिमा होमिएकी कोमल वलीले यसै वर्षदेखि शिवजीसँग पोई माग्न पनि छोडेकी छन् । पोई माग्न छोडेकी मात्रै होइन उनको नयाँ तीज गीतमा
काठमाडौं । हास्यकलाकार कुञ्जना घिमिरे “सुन्तली”ले मुसहर बालबालिकासँग आफ्नो जन्म दिन मनाएकी छन् । महोत्तरी बर्दिबासमा रहेका मुसहर बालबालिकालाई टिफिन बक्स वितरण गरेर जन्म दिन मनाएकी हुन् । मुसहर बालबालिकाले सम्मान र शुभेच्छासहित कुञ्जनाको जन्म दिनलाई विशेष बनाइदिएका छन् । उनीहरुले गरेको सम्मानले आफूलाई भावुक बनाएको कुञ्जना घिमिरेले बताएकी छिन
ह्वाइटहाउस एसएलसी प्रिन्सेस बनिन् नविना राई [फोटो फिचर]
काठमाडौं । प्रज्ञा भवनको डबलीमा सम्पन्न हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज एसएलसी प्रिन्सेस् २०१७ प्रतियोगितामा स्काई लार्क स्कुलबाट एसइई दिई विशिष्ट श्रेणीमा पास हुन सफल १६ वर्षीया नविना राईले विजेताको ताज पहिरिन सफल भएकी छन् । नविनाले प्रतियोगितामा शीर्ष उपाधिसहित मिस पपुलर अवार्ड पनि हात पार्न सफल भइन् । नविनाले
खाडीबाट साङ्गीतिक यात्रा बढाउँदै जिके दङ्गाली
घोराही । ‘खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन’ भनेझै प्रतिभावान व्यक्ति जहाँ गए पनि उसको प्रतिभा लुक्न सक्दैन । सानै उमेरदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा रुचि राख्थे दाङ घोराही –१५ निवासी गणेश खत्री अर्थात जिके दङ्गाली । उतिबेला उनलाई गीतको एल्वम निकाल्ने रहर नजागेको होइन । तर, त्यतिबेला आफूसँग पैसा नभएकै कारण गीत ननिकालेको
मिस नेपाल २०१७ मा दाङकी चेली पनि प्रतिष्पर्धी [फोटो फिचर]
काठमाडौं । मिस नेपाल २०१७ को प्रतियोगितामा दाङकी नीति शाह पनि प्रतिष्पर्धी रहेकी छन् । दाङको साविक धर्ना गाउँ विकास समिति वडा नं. २ की नीति शाह प्रतियोगितामा सहभागी भई उत्कृष्ट १९ मा परिसकेकी छन् । बुवा नोबल शाह र आमा शैलजा राणा शाहको कोखमा सन् १९९६ फेब्रुअरी २ मा
दङालीको मुहारमा खुशी भर्ने नायिका रेखा फेरि तुलसीपुरमा
दाङ । २०७० पुस १२ गतेको दिन । उनका आँखाभरि आँसु छचल्किएका थिए । उनी थिए– धर्ना गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बसन्तापुरका तिलकबहादुर विक र बसन्ती विक । छोरा गणेशबहादुर विकसँगै हजारौ सपना बोकेर कतार पुगेका तिलकबहादुर विकको सपना त्यतिबेला चकनाचुर भयो जतिबेला उनका छोरा विरानो मुलुक कतारमा
तुलसीपुर महोत्सवमा थामिनसक्नु भीडभाड, महोत्सव एक दिन अरु लम्बियो
तुलसीपुर । तुलसीपुरमा जारी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय ब्यापार तथा पर्यटन महोत्सव एवं औद्योगिक कृषि मेला २०७३ मा मेला सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोजकलाई भीड थामिनसक्नु भएको छ । शनिवार महोत्सवको १० औ दिन महोत्सवमा अत्यधिक भीडभाड भएको छ । तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको महोत्सवमा दैनिकरुपमा दर्शकहरुको उपस्थिति
नेपाली चेली तेरियाले चुमिन् “झलक दिखला जा”को उपाधि
काठमाडौं । भारतीय टेलिभिजन च्यानल कलर्सले सञ्चालन गरेको भारतीय सिनियर डान्स स्टारहरुबीचको प्रतिष्पर्धात्मक कार्यक्रम “झलक दिखला जा”को उपाधि नेपाली चेली तेरिया मगरले चुमेकी छन् । रुपन्देहीको रुद्रपुर निवासी १४ वर्षीया तेरियाले फाइनलमा प्रवेश गरेका अन्य दुई प्रतिष्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै उपाधि चुमेकी हुन् । फाइनलमा प्रवेश गरेपछि नृत्यमा निर्णायकहरुको मतसँगै एसएमएस